Munaasabad Lagu Taageerayo Musharaxnimada Khayre Oo Muqdisho (daawo Sawirada) | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Munaasabad Lagu Taageerayo Musharaxnimada Khayre Oo Muqdisho (daawo Sawirada)
Munaasabad Lagu Taageerayo Musharaxnimada Khayre Oo Muqdisho (daawo Sawirada)
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka qeyb galeen qeybaha kala duwan, laguna taagerayay musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre, ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Dhamaan dadkii munaasabada ka hadlay waxay sheegeen in la joogo xilligii Xasan Cali Khayre uu dalka hoggaamin lahaa si uu u dhameystiro shaqooyinkii wanaagsanaa ee uu dalka u qabtay xilligii uu dalka Ra’iisul Wasaaraha ka ahaa.
Xafladda ayaa lagu soo bandhigay suugaan lagu cabirayo waxqabadka, kartida, iyo rejada laga qabo inuu dalkaaan isbedel ku sameeyo Xasan Cali Khayre oo kamid ah musharixiinta ugu cad cad ee loo saadaalinayo inuu noqodo madaxweynaha 10aad ee dalka.
Dhallinyadada munaasabadda ka hadashay ayaa shaaciyay inay sii wadayaan munaasabadaha lagu taageerayo Xasan Khayre ayna gaarsiin doonaan guud ahaan dalka iyo dalka dibadiisa.
Xasan Cali Khayre oo ahaa Ra’iisul Wasaarihii ugu xukunka dheeraa ee dalka buruburkii kadib ayaa dhawaan shaaciyay inuu u ordayo xilka madaxweynaha dalka, waxuuna dalka dibadiisa ka billaabay olole xooggan oo uu ugu gogol xaarayo qabashashada xilka madaxweynaha dalka.
Previous articleSaraakiil Alshabaab ah oo Ciidamada Dowlada isku soo dhiibay
Next articleNabad Sugida Qaranka oo Xabsi dhigtay wadaad siweyn looga yaqaano magaalada Muqdisho
President Farmajo’s government has failed miserably
13 ka xubnood ee aqalka sare Muqdisho inta iska dayso bal...
One of the xenophobic groups admitted to being behind the killings